UKHULUNYELWE NGAMAGALELO OYOTAKULA EMKHANYAKUDE - Ilanga News
Home Izindaba UKHULUNYELWE NGAMAGALELO OYOTAKULA EMKHANYAKUDE
UDKT Siyabonga Ntuli oseqokelwe kwesemenenja kuMasipala waseMkhanyakude, okubekwe amathemba amakhulu kuye ukuthi uzokwazi ukulungisa isimo salo masi-pala odume ngezinkinga.
IZAKHELE iwozawoza ngamagalelo ayo imenenja kaMasipala wesiFunda uMkhanyakude, uDkt Siyabonga Ntuli, okuvela ukuthi yiwona aholele ekutheni umkhandlu unxuse ukuba ilandwe kuMasipala waseMtubatuba iyozama ukutakula lo mkhumbi ozikayo njengoba kuvame ukubikwa ukuthi lo masipala uyikhaya lezinkinga. Eminyakeni embalwa edlule ILANGA belilokhu libika ngezingqinamba ebezihaqe uMkhanyakude, okwakuthiwa ziholela ekutheni umasipala ungakwazi ukuyisa intuthuko emphakathini.
Zaholela nasekutheni kube nemibhikisho eminingi ezindaweni ezahlukene ezingaphansi kwawo, abantu bekhala ngendlala yamanzi. Ngokuthola kwaleli phephandaba ngemithombo yalo, uDkt Ntuli uqokwe ngoba kunethemba lokuthi angakwazi ukulungisa isimo eMkhanyakude. Kuke kwaba nesikhathi lapho lo masipala ungazihambisanga izicelo ezifanele emnyangweni ukuze unikwe imali yesibonelelo samaphakathi nonyaka odlule, ngenxa yokuthi imihlangano ibingahlali nhlobo. Lokhu kwenze iDemocratic Alliance (DA), yanxusa ukuba uhlakazwe lo masipala. Lo masipala kumanje ungaphansi komlawuli, uMnu Bamba Ndwandwe.
Ngokwemithombo yeLANGA, umkhandlu waseMkhanyakude uqale wabhalela uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Sipho Hlomuka, umnxusa ukuba awunike amagama abantu abethembayo ukuthi bagakwazi ukushintsha izinto kulo masipala. “Igama likaDkt Ntuli libephezulu ngoba ayaziwa amagalelo akhe futhi phela ubesebenza kuMasipala uMtubatuba ongaphansi kwawo lo masipala. Ungomunye wabantu ababonakale bengakwazi ukubhekana nalezi zi ngqinamba,” kusho umthombo. IMeya yaseMkhanyakude, uMnu Mandla Ndlela, ibuzwa ukuthi umkhandlu ufike kanjani ekutheni ukhethe uDkt Ntuli, uthe ngokwamaphuzu aqhamukile nangokwemisebenzi azelwa yona, kubonakale engakwazi ukuthi kulezi zinyanga ezintathu anikwe zona kube nomehluko awenzayo. “Kube yisinqumo somkhandlu ukuthi kukhethwe igama lakhe.
Uqale ukusebenza ngomhla ka-27 kuZibandlela (December), siyethemba ukuthi umehluko sizosheshe siwubone. Inkontileka yakhe ithi uma umkhandlu uphinde uvumelana, izonwe-tshwa ngeyezinyanga ezintathu, okwamanje,” kusho yena. Uthe bathande ukuthi naye uDkt Ntuli ungowaseMkhanyakude, uyaziqonda izingqinamba lo masipala obhekene nazo. “Siwabonile amagalelo akhe eshintsha isimo kuMasipala waseMtubatuba njengoba efike khona lungekho uzinzo kunezinkinga eziningi. Okuhleke ngoMkhanyakude wukuthi uzinzo selukhona, yikhona nje ukuthi sidinga kulungiswe izinto ngokoku-phathwa kukamasipala nemali yawo.
Siyethemba ukuthi uzokwazi ukusilekelela kulokho,” kusho yena. UDkt Ntuli ujutshwa eMkhanyakude nje, kuvele kunemenenja yakhona, uMnu Mxolisi Nkosi, okumanje isamisiwe. UMnu Ndlela ebuzwa ngesimo sikaMnu Nkosi njengoba esamisiwe, uthe nguDkt Ntuli ozokwazi ngaso ngoba yena akazi nanokuthi icala lakhe lihlala nini njengoba kungekho ezandleni zakhe lokho. Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu Kwa-Zulu-Natal, uMnu Senzelwe Mzila, utshele leli phephandaba ukuthi omasipala bazimele bazithathela bona izinqumo zokuqasha, ungqongqoshe akakwazi ukungenelela kulokho. Lokhu ukusho ebuzwa ngamahemuhemu abethi nguMnu Hlomuka okhiphe uDkt Ntuli eMtubatuba wamshova eMkhanyakude.
Previous articleUyamaniswa ne-Europe umdlali weChiefs
Next articleBabonga ILANGA kutholakala obenyamalele